Home/Valve menaka/Lubrication Pneumatic Vent Valve ho an'ny Hydraulic Powered, Automatic Control Single-Line Parallel Lubrication Equipment
1. Tosidra ambony indrindra: 0.08MPa (120 psi, 8 bar)
2. Tsindrin-drivotra ambany indrindra: 0.03MPa (40 psi, 3 bar)
3. Fanerena ranon-tsolika ambony indrindra: 26MPa （3800 psi, 262 bar)
Ny valva venty pneumatic lubrication HS-LVS dia mifandray amin'ny hose fanerena avo sy ny fitaovana ilaina hapetraka ao anaty paompy amponga fanosotra. Ny HS-LVS dia matetika ampiasaina amin'ny fitaovana fanosorana menaka na menaka misy paompy fanosorana pneumatic miasa amin'ny alàlan'ny tsipika tokana mifanila. Ireo singa mifandraika amin'ny HS-HL1.
Ny valva fantson-drano HS-LVS dia mamela ny famoahana paompy fanosihosena mba hananganana tsindry mba hahazoana ny fivoahana amin'ny fivoriambe rehetra. Ireo singa mifandraika amin'ny HS-HL1. Ny fanerena napetraka ao amin'ny fitaovana fanosorana dia maivamaivana avy amin'ny ampahany amin'ny fizarana noheverin'ny seranan-tsambon'ny valva mba hamela ny injectors reset ho an'ny tsingerin'ny fandidiana manaraka.
Ny fiasan'ny HS-LVS vent valve:
Ny valva fivoahana HS-LVS dia fehezin'ny valva solenoida elektrika 3/2 ao anaty paompy amponga fanosotra. Misy dingana roa ny fiasan'ny valva venty HS-LVS araka ny valva solenoida 3/2.
Rehefa mihetsiketsika ny valva solenoida 3/2, dia entina mankany amin'ny paompy fanosotra sy ny seranan-tsambon'ny rivotra ao amin'ny valva fivoahana LVS ny rivotra voatsindry. Ny rivotra miditra dia manosika ny piston 4. amin'ny vent vale mankany amin'ny toeran'ny mpandefa ary manidy ny seranan-tsambon'ny valva. Ny menaka na ny menaka avy amin'ny paompy fanosorana dia mikoriana amin'ny seranana famatsiana ny valva fanalefahana mankany amin'ny tambajotra fizarana.
Rehefa de-energize ny valva solenoid 3/2, dia esorina ny tsindry rivotra ao amin'ny paompy fanosotra sy ny valva LVS vent, lasa toerana fialan-tsasatra ny valva ary manokatra ny seranan-tsambon'ny valva. Ny fanerena napetraka ao amin'ny fitaovana fanosotra dia maivamaivana rehefa mikoriana amin'ny seranan-tsambon'ny fivoahana mankany amin'ny fitahirizana fanosotra ny menaka be loatra na ny menaka be loatra, mamela ny injectors andiany HS-HL1 hamerina ny toetry ny fiasan'izy ireo amin'ny tsingerina manaraka.
1. Vent Valve (Aluminium oxidation)
3. Vatana fandrefesana (vy karbaona avo)
5. Famonosana Piston Air (famolavolana molotra)
6. Fanjaitra vy
7. Valve Seza
8. Jereo Seat Gasket
9. Cylinder rivotra
11. Fonosana Retainer
Kaody famandrihana an'ny LVS Series Valve fanasan-damba
(3) P = Standard Max. tsindry, azafady jereo ny angon-drakitra ara-teknika etsy ambany
Tosi-drivotra ambony indrindra 120 psi (0.08 MPa, 8 bar)
Tosi-drà ambony indrindra 3800 psi (26 MPa, 262 bar)
Ampahany mando amin'ny ranon-javatra Carbon Steel & Fluoroelastomer
Ampahany mando amin'ny lafiny rivotra Aluminum & Buna-N
Recommend fluids Lubricant NLGI kilasy #1 na maivana kokoa
Ampahany mando amin'ny ranon-javatra 45 # Karbonina vy misy Zinc nopetahana, Fluoroelastomer
LVS Series Lubrication Vent Valve Fametrahana refy
[email voaaro]2021-12-20T12: 46: 25 + 00: 00